Diyaarad Yar Oo Ku Dhacday Guryaha Deriska: 2 Dhintay
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Aviation » Diyaarad Yar Oo Ku Dhacday Guryaha Deriska: 2 Dhintay
Aviation • Jebinta Wararka Safarka • News • Dalxiiska • Warka Safarka Safarka • Wararka Mareykanka
Shil Diyaaradeed Dhimasho
Diyaarad yar ayaa ku dhacday Santee, oo ah magaalo ku taal duleedka magaalada San Diego, California, galabta, Isniin, Oktoobar 11, 2021. Ugu yaraan 2 ayaa la ogyahay inay dhinteen.
Diyaarad nooceedu ahaa Cessna 340A ayaa ku burburtay 2 guri oo ku yaal xaafad ku taal duleedka magaalada waxaana ku dhintay labada qof ee saarnaa.
Jawaab -bixiyayaasha ugu horreeya ayaa isku dayaya inay xaqiijiyaan inaan qofna lagu dilin guryihii la galay. Laba ka mid ah dadka deegaanka ayaa la geeyay isbitaalka kadib markii ay ka baxsadeen mid ka mid ah guryaha.
Meel kumeelgaar ah oo dadka lagu daadgureynayo ayay Laanqayrta Cas dejisay.
The diyaarad dhacday galay 2 guri oo ku yaal geeska waddooyinka Jeremy iyo Greencastle abaaro 12:15 pm Duulimaadku wuxuu ahaa Cessna 340A qorshaheeda duulimaadkana wuxuu ka yimid Yuma, Arizona, kuna socday Montgomery Gibbs Airport Airport ee Kearny Mesa, sida uu sheegay afhayeenka Gobolka San Diego.
Masuuliyiintu waxay sheegeen inaysan weli garanayn tirada dadka saarnaa diyaaradda, laakiin waxay rumaysan yihiin in dhaawacyadu yihiin “kuwo aan badbaadi karin.” Jawaab -bixiyayaasha ugu horreeya ayaa ka shaqeynaya sidii ay u xaqiijin lahaayeen in kuwa ku jira guryaha ay saameeyeen ay awoodeen inay si ammaan ah uga baxaan.
Fiidiyow ay soo saartay SkyFOX, waxaa lagu arki karaa baabuurta dab -damiska oo dajinaya 2 -da guri ee ku burburay shilka. Heartland Fire & Rescue ayaa sheegtay in guri sedexaad uu waxyeello soo gaaray, waxaana shaqaalaha agabka halista ah ay aadeen aagga. Waxay u muuqatay in gaari xamuul ah uu sidoo kale ku dhacay.
Nin goobta joogay ayaa FOX 5 u sheegay inuu ka soo wacay deriskiisa isagoo u sheegay in hooyadiis iyo aabihiis loola cararay isbitaalka. “Ma garanayo dhaawacyadooda inta ay le’eg yihiin. Waan ogahay markaan la hadlay qaar ka mid ah deriska inay ahayd kuuskuusyo iyo nabarro badan. Waxaan u malaynayaa inay nasiib u yeesheen inay ku sugnaayeen guriga gadaashiisa markii ay dhacday maxaa yeelay wuxuu yimid xagga hore. Michael, oo ah deriska, ayaa hooyaday ka soo saaray daaqadda dambe, aabbahayna wuxuu ku jiray daaradda guriga sidaa darteed waxay jebiyeen xayndaabka si ay u soo saaraan. ”
Waxay ku taallaa 2 baloog oo galbeed ka xigta shilka waa Dugsiga Sare ee Santana, halkaas oo dhammaan ardaydu ammaan yihiin, sida lagu soo qoray Twitter. Ardayda waa la siidaayay si ay guryahooda ama qadada ugu tagaan, taas oo ku xidhan jadwalka fasalka Isniinta.
Meel ku -meelgaar ah oo ku -meelgaar ah ayaa Laanqayrta Cas ee Maraykanku ka samaysay Qoyska Cameron YMCA ee 10123 Riverwalk Drive gudaha Santee.
Sababta shilka ayaa baaritaan ku socota.